Archdiocese of Mandalay blog: အမေး၊ အဖြေ၊၊ ၊၊လူဝင်စားတယ်ဆိုတာ အမှန် တကယ်ရှိပါသလား?
အမေး၊ အဖြေ၊၊ ၊၊လူဝင်စားတယ်ဆိုတာ အမှန် တကယ်ရှိပါသလား?
အမေး၊ အဖြေ၊၊ ၊၊
မေး။ လူဝင်စားတယ်ဆိုတာ အမှန် တကယ်ရှိပါသလား? အတိတ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်သူပြော ပြလို့သိနေရတာလဲ? ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါ။
ဖြေ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ ယုံကြည်ချက်အရ ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်း စာတော်မြတ်နှင့် သာသနာတော်ကြီးရဲ့ အစဉ်အဆက်သင်ကြားခဲ့တဲ့ တရားနှုတ် ကပါတ်တော်များအထဲမှာ၊ လူဝင်စားခြင်း အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်အရ ဆိုရင် လူဝင်စားခြင်းဆိုတာ အမှန်တကယ် မရှိပါ။ လူသည် တစ်ခါတည်းသေ၍ ထို့ နောက်စစ် ကြောစီရင်ခြင်းခံရမည် (ဟေဗြဲ သြ၀ါဒစာ၉း၂၇)။ လူသားသည် မိမိဘုန်း အာနုဘော်တော်ကိုဆောင်လျက် သန့်ရှင်းသော ကောင်းကင်တမန်တော်များ အခြံ အရံတို့နှင့် တကွ ကြွလာတော်မူသောအခါ ဘုန်းရှိသော ပလ’င်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်၍ ရှေ့တော်၌ လူမျိုးအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေသဖြင့် သိုးထိန်းသည် သိုးနှင့် ဆိတ်တို့ကို တစ်ခြားစီ ခွဲထားသကဲ့သို့ လူအပေါင်းတို့ကို အသီးအခြားခွဲ၍ သိုးတို့ကို လက်ယာတော်ဘက်၊ ဆိတ်တို့ကို လက်ဝဲတော်ဘက် ၌ ထားတော်မူလတ္တံ (ရှင်မသဲ ၂၅း ၃၁-၃၃)။
ဒါကြောင့် လူဟာသေချိန်၌၄င်း၊ နောက်ဆုံးသောနေ့မှာ၎င်း စီရင်စစ်ကြောခြင်း နှစ်ကြိမ်ခံရလိမ့်မည်။ လူဟာ အသက် ထွက်ထွက်ချင်း ပထမဦးဆုံး စီရင်ခြင်းခံရပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဟာပုပ်သိုး၊ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးခြင်း၌ ကမ္ဘာကုန်သည့်နေ့ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်က ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာတော်မူပြီး တရားစီရင်ခြင်းအမှုပြု သည့်နေ့ရက်တိုင်အောင် တည်ရှိနေပြီး ကွယ်လွန်သူရဲ့ နာမ်ဝိညာဉ်ကတော့ အပြစ်ကြီးနဲ့ သေသွားခဲ့တယ်ဆိုရင် သေပြစ် သင့်ပြီးတော့ ပိုးမသေမီးမငြိမ်းတဲ့ ထာဝရ မီးအိုင်ထဲမှာ ထာဝရ ငရဲဒဏ်ခံရပါတယ်။ လွတ်လမ်းမရှိပါ။ အခြားဘ၀ကိုလည်း ၀င်စားခွင့်မရှိပါ။
အကယ်၍ ကွယ်လွန်သူရဲ့ နာမ် ၀ိညာဉ်ဟာ အပြစ်ကလေး၌ သေသွားခဲ့ တယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် လောကမှာ အသက်ရှင်စဉ်ခါ သေပြစ်၊ အပြစ်ကြီး ပြုခဲ့သော်ငြားလည်း နောင်တသံဝေဂနဲ့ မိမိပြုခဲ့မိတဲ့ အပြစ်များကို ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးထံ အာပါတ်ဖြေခြင်း စက္ကရမင်တူး မင်္ဂလာခံယူပြီး ဘုရားရှင်ရဲ့ အခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ခံယူပြီးနောက် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါလျှင် ငရဲငယ်၌ ကိုယ်တိုင် ဒဏ်ဆပ်ဖြေပြီးမှသာလျှင် ကောင်းကင် ရွှေပြည်တော် ထာဝရသုခချမ်းသာကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားကိုနှုတ်ဖြင့် ပြစ်မှားသော သူ၏ အပြစ်ကိုလွှတ်နိုင်၏။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ကို နှုတ်ဖြင့် ပြစ်မှားမိသောသူ၏ အပြစ်ကို ယခုဘ၀၊ နောင်ဘ၀၌ မလွတ်နိုင် (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၂း၃၂)။
လျော်ပြစ်ငွေရှိသမျှကို မလျော်မှီ တိုင်အောင်ထောင်ထဲမှ မထွက်ရဟု ငါအမှန်ဆို၏ (ရှင်လူကားခရစ်ဝင် ၁၂း၅၉)။
ဒါကြောင့် ငရဲငယ်လို့ခေါ်တဲ့ အဆုံးရှိတဲ့ဒဏ်မှာ ဆပ်ဖြေနေကြတဲ့ ကွယ်လွန်သူ မိဘဆွေမျိုး၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ မိတ်ဆွေသားချင်းတွေရဲ့ ၀ိညာဉ်တွေအတွက် မစ္ဆားပူဇော်ပေးခြင်း၊ မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးခြင်း ကောင်းမှုကုသိုလ် ဂရုဏာလုပ်ငန်းများ လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ဖို့ ကူညီဖို့ သမ္မာကျမ်းစာတော်နှင့် သာသနာတော်ကြီးက အစဉ်မပျက် သွန်သင်လျက် ရှိနေပါတယ်။ တပည့်ကြီးသံဃာတော်တို့ စီရင်ရေးထားကြသော ယုံကြည်ခြင်း အချုပ်ထဲမှာ "သူတော်သူမြတ်အပေါင်း တို့သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်၍ အချင်းချင်းအကျိုးကုသိုလ်တို့ကို ခံစားရကြောင်း"လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လောကမှာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများက ကွယ်လွန်ပြီး ငရဲငယ်မှာ ဒဏ်ဆပ်ဖြေနေရတဲ့ ၀ိညာဉ်များအတွက် ကောင်းမှု ကုသိုလ်များကို ပြုပေးခြင်း၊ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပြုပေးခြင်း အကျိုးကုသိုလ်တို့ကြောင့် အဲဒီဝိညာဉ်တွေဟာ ငရဲငယ်မှ လွတ်မြောက်ကြပြီး ဘုရားရှင်စံပျော်ရာ ထာဝရ သုခချမ်းသာ ရွှေပြည်တော်၌ ဘုရားရှင်နှင့် အတူ စံစားခွင့်ရရှိကြပါတယ်။ ဒီလို ထာဝရသုခချမ်း သာကို စံစားနေရစဉ် ကောင်းကင် ရွှေပြည်တော်ကနေ တစ်ဖန် မိမိတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့သူများအဖို့ ဘုရားရှင်ထံ ပြန်လည်ပြီး ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သမှုကြောင့် လောကမှာ အသက်ရှင်နေတဲ့ ကျန်ရစ်သူများဟာ အကျိုးကုသိုလ်များကို တန်ပြန် ခံစားကြရပါတယ်။ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ အလိုတော်မြတ်ကို လောကဘ၀မှာ ဆက်ကပ် ဆောက်တည်ခဲ့ကြလို့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါ ထာဝရ သုခချမ်းသာကို ချက်ခြင်း စံစားပျော်ရွှင်ခွင့်ကို ရရှိကြပါတယ်။
ယေဇူးကလည်း ငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။ ငါကို ယုံကြည်သောသူသည် သေလွန်သော်လည်း အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ငါကို ယုံကြည်၍ အသက်ရှင်သော သူဟူသမျှတို့ သည်လည်း သေခြင်း အစဉ်မပျက်ကင်း လွတ်ကြလိမ့်မည် (ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင် ၁၁း၂၅-၂၆) ဒါကြောင့် ခရစ်ယာန်သမ္မာ ကျမ်းစာတော်နှင့် သာသနာတော်ကြီးရဲ့ သွန်သင်ချက်များ တရားတော်များအရ လူဝင်စားခြင်းဆိုတာ အမှန်တကယ်မ ရှိပါလို့ဖြေကြားလိုပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အရင်ဘ၀က ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အတိတ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဒီလူဝင်စားတဲ့ သူက ဘာကြောင့်ပြောပြနိုင်ပါသလဲ။
စာရှုသူအပေါင်းတို့ခင်ဗျား လောက မှာလူတွေဟာအကြား၊အမြင်၊ အထိအတွေ့၊ အနံ၊ အရသာလို့ ခေါ်တဲ့ အာရုံငါးပါးအားဖြင့် သိကြရပါတယ်။ အချို့မှာတော့ အကြားအာရုံချို့ယွင်းလို့ စက္ခုအာရုံ ချို့ယွင်းလို့ အာရုံ(၄)ပါးလောက်နဲ့သာ သိကြရပါတယ်။ လူဟာ အာရုံ(၅)ပါးအားဖြင့် အတိတ်က ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံများကြောင့် သိသလို လောကပစ္စုပန် ကာလမှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှကိုလည်း ဒီအာရုံ(၅)ပါး အားဖြင့် သိနေ ရတယ်။ ဒီလို အာရုံ(၅)ပါးအားဖြင့် သိရသော အသိကို ပုံမှန်အသိ၊ သဘာဝအသိ လို့ခေါ်တယ်။ နောက်အသိ နှစ်မျိုးကတော့ သဘာဝထက် လွန်ကဲတဲ့အသိနဲ့ နိမ့်ကျတဲ့ အသိရယ်လို့ နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်။ သဘာဝထက် လွန်ကဲတဲ့အသိနဲ့ အနိမ့်ကျဆုံး အသိကို နားလည်ဖို့အတွက် ၀ိညာဉ်သုံးမျိုး အကြောင်းကို လေ့လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၀ိညာဉ်သုံးမျိုးအနက် ပထမ၀ိညာဉ်ကတော့ Evil Spirit မိစ္ဆာနတ်ဆိုးရဲ့ ၀ိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ ဒုတိယ၀ိညာဉ် ကတော့ Human Spirit လူ့ရဲ့စိတ် ၀ိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ တတိယ ၀ိညာဉ်ကတော့ HolySpirit သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်။ ဒီဝိညာဉ် သုံးပါးအနက် လူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာ ရှိတဲ့အသိ အားလုံးဟာ သာမန် အသိ ပုံမှန်အသိဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သဘာဝအသိရှိနေတဲ့ လူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ၀ိညာဉ်တော်အုပ်စိုးတော်မူခြင်း ခံရပြီဆိုလျှင် အဲဒီလူမှာ ရှိပြီးသား သာမန်ပုံမှန်အသိနှင့် တကွ သဘာဝထက်လွန်ကဲတဲ့ အသိတွေ ရရှိလာပါတယ်။ ဒါကို အကြား အမြင်ပေါက်တယ်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာ မိမိကိုယ်ကို အစဉ်နိမ့်ချပြီး မောက်မာမှုများ၊ မာနကြီးမှုများကို ဂရုစိုက်ပြီးအသိနဲ့ သတိထားကာ ရှောင်ရှားမှုပြုဘို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ မာနထောင်လွှားခဲ့သော် ဘုရားရှင်ရဲ့သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားဟာ မာန်မာနကြီးတဲ့ နှလုံးသားတွေမှာ ကျိန်းဝပ်တော်မူခြင်း မပြုလိုတာကြောင့် မိမိဘ၀ မှ ထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင် အကြားအမြင်တွေဟာ သဘာဝထက်နိမ့်ကျတဲ့ အသိတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားပါလိမ့်မည်။ သူတစ်ပါး အများအကျိုးအတွက် မသုံးတော့ပဲ နတ်ဆိုးဆန်ဆန် နိမ့်ညံ့စွာ ပညာပြလာပြီး သူတစ်ပါး ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့ သဘာဝထက် နိမ့်ညံ့တဲ့ အာရုံဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
သာမန် အသိရှိတဲ့ လူ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာ နတ်ဆိုးရဲ့ အုပ်စိုးခြင်းကို ခံရပြီးဆိုရင် ဘ၀ထက် နိမ့်ညံတဲ့ အသိတွေရရှိလာပြီး အပြောအဆို၊ အပြုအမူ၊ အကြံအစည် အားလုံးဟာ မကြားဝံ့မနာသာ အောင်ယုတ်ညံ့ချင် ယုတ်ညံ့မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အစမှာ ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ အဆုံးမှာ အဖျားရှုးတတ်တယ်။ နတ်ဆိုးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၉၈%ဟာ လူ့ရဲ့ မနောထဲကိုဝင်ပြီး ဒေါသ၊ လောဘ၊ မောဟ၊ ကိလေသာ၊ တဏှာတွေကိုထည့် ပေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လူ့ရဲ့အသိဟာ သဘာဝထက် ယုတ်ညံ့လာတယ်။ ရန်ဖြစ်တယ်၊ ခိုးတယ်၊ သတ်တယ်၊ ၀ှက်တယ်၊ လိမ်လည် လှည့်ဖျားတယ်။ ဒီနည်းကို နတ်ဆိုးက အသုံးတည့်လွန်းလို့ ၉၈% သုံးတယ်။ ကျန်တဲ့ ၂% ကတော့ အသုံးနည်းတယ်။ အဲဒီ ၂% နှောက်ယှက်နည်းကို လေ့လာလိုက်ရင် လေးမျိုး လေးစားရှိပါတယ်။
ပထမတစ်မျိုးကတော့ Affliction ဒုက္ခ ဝေဒနာစွဲကပ်မှုဖြစ်တယ်၊ မန်းမှုတ်ထားတဲ့ အရာတွေကို စားမိလို့၊ ဆောင်ထားမိလို့ ဒါမှမဟုတ်ရင် နတ်ဆိုးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကို သွားမိလို့၊ အင်းချထားခြင်း ခံရလို့ ဖျားနာခြင်း၊ အိပ်မရခြင်း၊ အပင်းထည့်ခံရလို့ စားမရခြင်း၊ အဆင်မပြေပဲ ကိုးလို့ကန့်လန့်ဖြစ်နေခြင်း ဒုက္ခ ဝေဒနာစွဲကပ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်တယ်။
ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ Oppression ဖိနှိမ်ချုပ်ချယ်ခြင်း၊ စိုးမိုးခြင်း ခံနေရခြင်း ကိုခေါ်တယ်။ ဒီလို ခံစားနေရခြင်း မှာလည်း ပထမအမျိုးစားလိုပဲ၊ နတ်ဆိုး မိစ္ဆာရဲ့ မန်းမှုတ်ထာတွေ စားမိ၊ သုံးမိ၊ ဆောင်ထားမိ အင်းချထားခြင်းခံရလို့ နတ်ဆိုးရဲ့ အုပ်ချုပ်စိုးမိုးခြင်း ခံရပြီး လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းကာ ဘုရားတရာနှင့် ပတ်သက်လာရင် ကြောက်ရွံ့နေခြင်း၊ စိတ်ပုတီး မစိတ်ချင၊် ဘုရားရှိခိုးလို့လဲ မရပဲ လေးလံနေခြင်း ဖြစ်တယ်။
တတိယတစ်မျိုးကတော့ Possession နတ်ဆိုးပူးခြင်း၊ မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူးနှင့် နတ်ဆိုးပူးခြင်းခံရပြီး မိမိ ကိုယ်ကိုလုံးဝမသိပဲ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို နတ်ဆိုးက နေရာယူ အုပ်စိုးချုပ်ကိုင်ထားခြင်း ပဲဖြစ်တယ်။
စတုတ္ထတစ်မျိုးကတော့ Obsession လူရဲ့ စိတ်တစ် စိပ်တစ်ဒေသကို အုပ်စိုးထားခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒီလို အုပ်စိုးခြင်း ခံရတဲ့ လူရဲ့မနောစိတ်ထဲမှာ အရေးမကြီးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးများကို ဖြစ်စေ နတ်ဆိုးသိထားတဲ့ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်၊ ဘ၀ဟောင်းက ဖြစ်ရပ်တစ်ချို့ကို ဖြစ်စေထည့်ပေးလိုက်ခြင်း ပဲဖြစ်တယ်။ များသောအားဖြင့် ကလေးအရွယ်မှာ ထည့်ပေးမှုကြောင့် လူဝင်စားအသွင်မျိုး ပြောလေ့ ပြောထရှိကြတယ်။ မိမိစိတ်ထဲမှာ နတ်ဆိုး ထည့်ပေးသလောက်ပဲ မိမိဝင်စားတဲ့လူကို သိသလို၊ ပစ္စည်းအချို့ကို ရွေးချယ်နိုင်တယ်။ အသက်ကြီးမှ ဒီလို နတ်ဆိုးရဲ့ထည့် ပေးမှုကိုခံရပြီ ဆိုရင် အဲဒီလူဟာ မိမိဟာဖြင့် ဘယ်သူလိုလို၊ ဘယ်ဝါလိုလို ပြောတတ်သလ၊ို အချို့ကြတော့ အကြားအမြင်ပေါက် သလိုလို လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်ရဲ့ ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့ ပေါင်းစပ်ခြင်းလား၊ နတ်ဆိုးရဲ့ လှည်းဖြားခြင်းလား ဆိုတာ ချက်ခြင်း လက်ငင်းခွဲမရပါ အချိန်ယူရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရစ်ယာန် တရားတော်အရ အဖြေကတော့ လူဝင်စားခြင်းဟာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ အရင် ဘ၀က ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေလိုလို၊ အတိတ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေလိုလို၊ ပုံမှားရိုက်ပြီး လူရဲ့မနောစိတ် တစ်စိပ်တစ်ဒေသထဲမှာ ထည့်ပေးပြီး လှည့်စားလိုက်တဲ့ မာန်နတ်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှည်စားချက်သာဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြား လိုက်ရပါတယ်။
(အာဗွီအေ အသံလွှင့်အစီစဉ်မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်)။
အမေး၊ အဖြေ၊၊ ၊၊လူဝင်စားတယ်ဆိုတာ အမှန် တကယ်ရှိပါသလာ...
ဘာသာတရားကို မြန်မာမှုပြုကြမည်ဆိုပါက (အပိုင်း ၃)